Rehefa Mitondra Mankamin’ny Mobcasting Ny Podcasting Finday · Global Voices teny Malagasy
Rehefa Mitondra Mankamin'ny Mobcasting Ny Podcasting Finday
Voadika ny 25 Oktobra 2017 6:41 GMT
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny Janoary 2005)
Vao avy nandefa fampidirana iray teo amin'ny vohikalako aho izay mety ho mahaliana kokoa. Mikasika ny mobcasting izany – hevitra fampitambàrana ny podcasting amin'ny finday miaraka aminà hetsika iray lalin-tsaina. Fampianarana iray nosoratako tamin'ny 15 Janoary 2005 no nakàna hevitra mikasika ny fomba hanaovana podcast miaraka amina smartphone iray fotsiny. Ity ny ampahany tamin'ny blaogy:
Inona no tiako ambara amin'ny hoe “mobcasting”? Izao àry, tena mandray indroa miantoana io, raha tianareo: famakiana iray sady atao amin'ny podcasting no amin'ny Smart Mobs, ny traikefan'i Howard Rheingold mikasika ny fandrindrana sosialy niparitaka be sy nampiasaina tamin'ireo teknolojian-tserasera. Tamin'ny taona 2004 ny Smart mobs dia tena namàka lalina teny anivon'ireo fampahalalam-baovao mahazatra, amin'ny ankapobeny dia tamin'ny endrika fampisehoana artistika nofinofy sy tsy mahazatra noketrehana tay anaty aterineto. Saingy ny smart mobs lalin-tsaina dia matanjaka kokoa noho ny vondrona mpianatra iray manao fampirantiana anaty trano fanaovana zavakanto amin'ny 12ora15, mitsangana amin'ny tongotra an'ila sady mikiakiaka hoe “Tevye, midina eny ambony tafo eny!” mialohan'ny hialàny tsy misy fanehoankevitra hafa akory. Sahala amin'ny fampiasana ny SMS nandritra ireo fihetsiketsehana manohitra ny Estrada tao Filipina, mety ho endrika hetsika vondrona sosialy maromaro azo atao amin'ny ICTs ny smart mobs.
Ohatra iray malaky: alaivo sary an-tsaina ny fihetsiketsehana iray goavana mandritra ny fifanarahana ara-politika iray. Mandritra ilay hetsika fanoherana, tafahoatra ny fampiharam-pahefana ataon'ireo mpitandro filaminana sady manomboka ratsy ny fitondràn'izy ireo ny mpanohitra, indraindray aza mampiasa herisetra.
Mpanao gazety vitsivitsy no mandrakotra ilay zavamitranga, saingy tsy mivantana. Ho an'ireo mpanohitra sy ireo mpikatroka ho an'ny zo sivily tratra tao anaty sakoroka, ilaina tehirizina mazava tsara ireo fanamparam-pahefana nataon'ny mpitandro filaminana ary aely faran'izay haingana indrindra. Tsy voatery hiandry ireo mpanao gazety hanao tantara mikasika an'io, fa tonga dia raisin'ireo mpikatroka amin'ny finday fakàn'izy ireo lahatsary ny zavamitranga – finday ampolony avy aminà zoro ampolony. Noho ny tambajotra 3G eto an-toerana (na ny wi-fi an'ny vondrom-piarahamonina), avy hatrany dia mandefa podcast mankany amin'ny blaoginy ireo mpikatroka.
Angonina any amin'ireo vohikala momba ny zo sivily avy amin'ireo fahana RSS vokarin'ireo blaogin'ny podcasters ireo lahatsary / sarimihetsika. (Na angamba, nalefan'izy ireo mandehandeha mivantana any anaty vohikala iray foibe ny lahatsariny, tao amin'ny fahitalavitra OneWorld saingy arahana RSS iray.) Mitondra ho aminà fandrakofana iray ataon'ireo blaogera manerana ny tontolon'ny blaogy izany, izay mitondra ho amin'ny fandrakofana ataon'ireo media mahazatra avy eo, ary mitondraho amin'ireo fitakiana fandraisana andraikitra ataon'ny vahoaka ihany koa. Izay no mobcasting.
Maniry ny handre ireo eritreritrareo mikasika ityy fotokevitra ity…….-andy
27 Aogositra 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana